Kugadzirira kwekuoma kwakanyanya, kwakanyanya kupisa kupisa, kupisa kukora, kupfeka kuramba uye kupisa kwakanyanya kwezvimwe zvinhu zve nitrias chinokanganisa Zvimwe zvekusimba kwesimbi yakanyungudika. Kugadzirira kwezvakakosha zvedongo zvinhu. Kugadzira kweakakosha chiwanikwa inopupuma vamiririri Inoshandiswa mukugadzirwa kwegirazi rakakosha. Catalyzed polymer crosslinks Kudzoreredza tsvina yenyukireya. Catalysts ye synthetic diamond synthesis uye catalysmaterials ye cubic boron nitride
Molecular fomula Mg3n2
CAS Nhamba 12057-71-5
Nzvimbo yakanyunguduka 800 C
Chitarisiko shava powdel
Zvishandiso Kugadzirira kwekuoma kwakanyanya, kwakanyanya kupisa kupisa, kupisa kukora, kupfeka kuramba uye kupisa kwakanyanya kwezvimwe zvinhu zve nitrias chinokanganisa Zvimwe zvekusimba kwesimbi yakanyungudika. Kugadzirira kwezvinhu zvekufananidzira. Kugadzira kweakakosha chiwanikwa inopupuma vamiririri Inoshandiswa mukugadzirwa kwegirazi rakakosha. Catalyzed polymer crosslinks Kudzoreredza tsvina yenyukireya. Catalysts yeyakagadzirwa yedhaimani synthesis uye catalysmaterials eiyo cubic boron nitride
Iyo molekyulu fomula yemagnesium nitride ndeye Mg3N2 uye iyo molekyuli uremu i100.9494. CAS: 12057-71-5
EINECS: 235-022-1 Inonyungudika poindi: 800 ℃, inovirisa poindi: 700 yellow, greenish yero poda kana block, hama density iri 2.712, 800 ℃ kuora, 700 ℃ mune vacuum sublimation, magnesium nitrided se ionic komputa, inokurumidza hydrolysis mu mvura. Soluble in acids, insoluble in ethanol, magnesium nitride, senge akawanda esimbi nitrides, inopindirana nemvura kugadzira ammonia.
Magnesium nitride inoshandiswa zvakanyanya. Magnesium nitride chinhu chakakosha sintering mubatsiri mune yakasimba reaction ye boron nitride uye silicon nitride ceramics ine yakanyanya kuomarara, yakanyanya kudziya conductivity, kupfeka kuramba, ngura kuramba uye yakanyanya kupisa tembiricha. Magnesium nitride inoita basa rakakosha mukudzoserwa kwemafuta enyukireya, kunatswa kwemagnesium alloy inonyungudika uye catalysis ye hBN reaction. Uye zvakare, Mg3N2 seyekuwedzera inogona kunyatso desulfurize uye kuwedzera alum, kuitira kuti ivandudze huwandu, simba, tensile simba uye kutakura kugona kwesimbi.
Iine huwandu hwakawanda hwekushandisa; Magnesium nitride inogona kushandiswa se:
1. Gadzirira nitride yezvimwe zvinhu nehurema hwakawandisa, kupisa kwakanyanya kupisa, kurwisa ngura, kupfeka kuramba uye kupisa kwakanyanya kupisa;
2. Gadzirira zvakakosha zvedongo zvigadzirwa;
3. Furo mumiriri yekugadzira yakakosha alloy;
4. Inoshandiswa kugadzira girazi rakakosha;
6. Kudzokororazve tsvina yenyukireya;
7. Catalysts ye synthetic diamond uye cubic boron nitride;
8.Zvimwe zvekuwedzera kwesimbi simbi yekunyungudutsa, nezvimwe
9. Magnesium nitride Mg3N2. (Vacuum package)
KUSHANDISA kweMg3N2 sechiwedzera
(1) nitride magnesium (Mg3N2) imwe nzira yekuvaka yesimbi yekunyungudisa magnesium desulfurization, inofadza kugadzirisa kuwanda kwesimbi yakasimba tensile uye kutsungirira, kuwedzera zvinhu zvemukati alum (Vitriol) zvemukati, yakasvika pamwero wehurumende yeChinese kuisa pamberi kuvakwa kwemhando yepamusoro simbi (2) ichishandisa magnesium nitride (Mg3N2) desulfurization, inogona kudzikamisa zvimwe zvinowedzera, izvo zvinobatsira kudzikisa mutengo wekugadzira wesimbi yekuvaka munyika medu ikozvino mune zvigadzirwa zvesimbi fekitori, avhareji mutengo patani yakaderera RMB 300-450 yuan ($ 36.3-54.5) kunyorera:
1. Magnesium uye magnesium alloy ndiyo yakareruka simbi mamiriro ezvinhu muinjiniya application, iyo deformation yepurasitiki inogadzira tekinoroji yemagnesium alloys mumakore achangopfuura yave indasitiri yemaginesi yepasi yakakosha yekutsvagisa munda wemagnesium alloy mune ramangwana rekushomeka kwesimba richagara. chinonyanya kukosha nzvimbo parizvino, magnesium alloy muaerospace mota yemagetsi yekuvaka indasitiri uye hupenyu hwezuva nezuva hwakakosha zvakakosha zvinhu asi magnesium alloy mune yakashandiswa zvakanyanya panguva imwechete ichine hutera hwayo, senge kushoma kwekuomarara, simba, uye nzvimbo yekunyunguduka yakaderera Kupfuura zvakajairika simbi simbi simbi yekuvandudza kugona kwepurasitiki inogadzira magnesium alloy rave iko kutsvagisa kwemagesium alloysHot, nekudaro, kutsvaga kuomarara kwakanaka, simba, asi zvakare kune yakanyanya yakatarwa simba uye kuomarara kwakasarudzika, ine kukosha kwedzidzo uye kwemaindasitiri kushanda Kukosha (2) mumakore achangopfuura, pamwe nekuvandudzwa kwepamusoro-kumagumo michina yayo ical uye magetsi zvigadzirwa zvigadzirwa zvinogadzirwa, pane echimakanika zvimiro zve magnesium alloy inoda kuenderera mberi nekuvandudza, ine particulate yakasimbiswa magnesium matrix alloy zvinhu inogona kushandisa magnesium alloy matrix panguva imwechete uye kuwedzera kubatsirwa kwechikamu, zvakanyanya kugadzirisa simba re magnesium alloy ine elastic modulus yekuoma uye yekupfeka kuramba uye inowedzera yakasimbiswa magnesium matrix alloy zvinhu nekuda kwemutengo wayo wakaderera, simbaRigidity yakakwira, mumunda wekugadzirwa kwazvino kwemaindasitiri, senge yekugadzira kwepamberi, vane tarisiro yakakura yekushandisa (3) zvichibva pane zvataurwa pamusoro Chinangwa, kushandisa isina-chepfu kusvibiswa-yemahara inowedzerwa mune iyo magnesium alloy magnesium - nitride nanotubes particles kusimudzira simba remagnesium alloy zvinhu, kuomarara kwakanaka uye kuomarara, panguva imwe chete, kugadzirisa zvinobudirira kuitisa uye kupisa kuitisa kuitisa kwemagnesium alloy substrate zvinhu zvemakemikari akaumbwa uye mhando mamaki ndeiyi: magnesi um Mg: 90-98, izvo zvasara zvinoshandiswa zvealuminium Al patent, kugadzirisa mashandiro e magnesium alloy mune yedu iripo magnesium alloy mune patent 200880017616.2, nekuwedzera indium scandiumYttrium nedzimwe simbi dzinokosha uye 2-3% yenyika isingawanzo simbi, simbi inopedzwa yapera sosi yezviyo isingasviki kana yakaenzana nemamirioni matatu, chigadzirwa ichi chinowedzera zvimwe zvakakosha simbi yezvinhu = yakakwira, kudhura kwekugadzira mitengo patent 201210324168.9, sarudza inokwanisa kugadzirisa iyo Mg alloy amorphous maumbirwo (Er, Cu, Ag) sezvinhu zvekusanganisa, inosarudza iyo yakajairika kukanda uye inopisa nzira yekutsvagisa iyo alloy zvinhu, uye mushure mekukanda uye extrusion ye magnesium alloy neaya ari pamusoro alloys ine isingawanzo simbi yekuwedzera, kunyange ichigona kuvandudza ductility ye magnesium alloy zvinhu Hukukutu uye abrasion kuramba, asi kwakawedzera iyo magnesium alloy yekunyungudutsa mutengo, panguva imwe chete, kuti uwane simba rakakwirira uye kudzvinyirira kuramba, inoda kuramba uchiwedzera-kudzika kudzidza CN 201610474622.7 inotsvaga nzira yekugadzirisa yakadzikama isingadhuri-isingasvibise emesi inogona kunge iri pasi peyakajairika yekunyungudutsa kugadzirwa kwemagnesium - nitride kabhoni nanotubes kugadzirira kweyakagadziriswa magnesium matrix alloy, magnesium alloy zvinhu zvine yakawanda yechinyakare simba kuomarara kwekuoma uye kupfeka kuramba yakawedzera zvakanyanya, nekudaro, nekuwedzera magnesium - nitride kabhoni nanotubes chidimbu chekupindura kugadzirisira chinangwa kune chinamato zvivakwa zve magnesium chiwanikwa zvinhu.
Pashure: Titanium Nitride Upfu, TiN
Zvadaro: Zirconium Nitride, ZrN